Tanglu: fizarana miorina amin'ny Debian | Avy amin'ny Linux
Tanglu: fizarana miorina amin'ny Debian
Alf | | Fitsinjarana, GNU / Linux
Ahoana, hoy ny lohateny, Tanglu dia fizarana vaovao izay hiorina amin'ny Fitsapana i Debian, ary natao ho an'ny mpampiasa farany, miaraka amina famoahana / fanavaozana isan-taona.
¿Tanglu tonga hameno ny akany navelany Ubuntu? Angamba. Ny tanjon'ny Tanglu dia ny manolotra "fizarana hafa" izay mora ho an'ny mpampiasa farany, ary mety manontany tena ianao hoe maninona raha mandray anjara mivantana Debian?
Ao amin'ny fanambarana ofisialy hazavain'izy ireo tsara izany. amin'ny Tanglu azo atao miaraka ny zavatra Debian tsia, ohatra, ampidiro ny firmware mikirakira trano. Ankoatr'izay, araka ny lazain'izy ireo amintsika fa afaka mankafy isika GNOME o KDE (ny tontolon'ny Desktop voalohany hampiasain'izy ireo) saika madio, satria tsy hanampy fanovana tsy ilaina izy ireo.
Momba ny latabatra, Tanglu dia hampiditra izay rehetra misy ao Debian. Amin'izao fotoana izao dia hanomboka izy ireo araka ny efa nolazaiko KDE, fa miandalana, ary indrindra raha manampy ny Community, dia afaka mankafy tsiro hafa ianao GNOME o Xfce.
Tanglu dia tetikasa misokatra, tarihan'ny fiarahamonina. Amin'ny fanombohan'ny tsingerina tsirairay, ny olona dia afaka manome sosokevitra momba ny tanjona famotsorana tadiavin'izy ireo (mitovy amin'ny Fedora, fa tsy misy FESCO). Ireo tolo-kevitra ireo dia resahina imasom-bahoaka ary holavina raha misy olana ara-teknika lehibe. Raha tsy hita ny marimaritra iraisana amin'ny tolo-kevitra iray, dia mifidy. Ny volavolan-kevitra dia azo ekena amin'ny maro an'isa tanteraka. Raha tsy mitranga izany dia ahemotra amin'ny kinova manaraka ny tolo-kevitra, ahafahan'ny olona mifidy azy io indray. Raha tsy misy te hiasa izany dia holavina. Amin'ny ankapobeny, ny fanapahan-kevitra raisin'i Debian dia ambony ary tsy maintsy arahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Tanglu: fizarana miorina amin'ny Debian
Amiela dia hoy izy:
Tiako ilay hevitra, efa natombokay indray ireo soritr'aretin'ny versionitis ary raha distro miorina amin'ny Debian izy dia tiako izany ... efa nijery "misavoritaka" amin'ireo vaovao ireo aho ary mijery hoe manankarena izaitsizy, miaraka amin'ny KDE izany Hahatsapa ho ao an-trano aho. Manomboka eto mandra-pivoakany ary misy misintona azy, tsara ho any amin'ny tranonkala ofisialy aho hamaky mamelombelona.
Valiny tamin'i Amiel
Modely maromaro no naroso, ny iray amin'izany dia hitovy amin'ny Chakra (antsasaky ny fihodinana):
1- Votoatin'ny programa (kernel, gcc ...) izay havaozina indroa isan-taona ihany.
2- Andiana singa finday misimisy kokoa (python, ruby, sns)
3- Ny rindranasa farany, izay satria efa maro no navoaka tamim-pitoniana lehibe (Firefox, LibreOffice, KDE, sns) dia hampidirina eo noho eo.
Marina indrindra. Raha ny marina amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny IRC aho mijery lahateny tena mahaliana, toy ity iray ity:
leszek: hi, esorinao daholo ve ny patch? Ary ohatrinona no ilainao hanovana ny fonosana ho an'ny neptune? (Kubuntu-dev aho)
yofel: tsia tsy hesorinay daholo ireo paty Fehiny voafaritra manokana amin'ny kubuntu, toy ny amin'ny kde-workspace izay nanovana ny lahatsoratra kdmrc ho «Tongasoa eto Kubuntu» ary koa ny sasany hafa toa ny patch ao amin'ny pejy fandraisana
ah eny, mila fanovana ofc izany.
Ka raha tsy izany dia miasa tsy miova ny ankamaroany?
yofel: ary mazava ho azy fa mametaka ny fiteny
satria ny kubuntu dia mampiasa fonosana fiteny * fonosana ary ny debian dia saika fonosina ny fiteny kde zavatra manokana ao amin'ny kde-l10n- *
raha tsy izany dia mandeha tsara
Tsy mamono tena izy ireo amin'ny ankapobeny. Raisin'izy ireo, ohatra, ny efa vita avy amin'ny Kubuntu, manova izay ilainy izy ireo, manala ny zavatra tsy tadiaviny ary mampifanaraka azy amin'ny Debian Testing .. Ary hoy koa izy ireo tamiko:
elav: raha tianao ny neptune dia mifototra amin'ny fanandramana ankehitriny (wheezy) miaraka amin'ny trano fitahirizan-tenanay manokana izay amboaranay kde (ny ankamaroany dia avy amin'ny fonosana loharano kubuntu misy nesorina) ary ny toerana anaovantsika azy miaraka amin'ireo rindranasa nohavaozina sy ireo fonosinay manokana (asa-tanana, config default. sy ny sisa) .. + manana ny kernel antsika manokana izahay avy amin'ny iray amin'ireo devinay
Fotoana elaela izay vao nientanentana tamin'ny vaovao toy izao aho.
Tanglu no ho fizarana tonga lafatra ho ahy, satria hampiasa an'i Debian aho ary raha tsy mahazo ny hevitry ny fanambarana ofisialy aho dia tsy hiandry ny hatsiaka rehetra hahazoana ireo fonosana farany (raha mbola azo ampiasaina izy ireo).
Ny zava-misy fa tonga miaraka amin'ny KDE dia plus ho ahy. Ary ny maha-mandray anjara mivantana an'i Debian ny mpamorona azy, dia manome toky ahy hampiasa azy io ho distro lehibe.
Enga anie ka tsy ho faty ny tetik'asa .. Hoy fotsiny aho: Mahantra LMDE sy SolydX raha tanteraka izany hahaha
Azoko atao angamba ny miara-miasa amin'ny tetikasa iray. Niezaka ny mafy indrindra hiarahako miasa amin'ny ChakraProject aho, saingy tsy nomen'izy ireo ahy mihitsy ny baolina (araka ny lazainay any Costa Rica). Mpampiasa mahatoky an'i Chakra aho na eo aza izany, satria amiko ny distro tsara indrindra KDE misy. Toy ny ankamaroan'ny eto, raha famoahana ilay izy, dia lavorary.
Inona avy ireo fiaraha-miasa ireo?
Raha nataon'izy ireo ho maodelin'ny Rolling Release, dia izy io no ho solon'ny LMDE.
Na izany na tsy izany, manomboka mitombo dwarfs i Ubuntu, ary faly amin'ny dingana iray aho. Tena nandoro ahy ny olan'ny MIR.
Ary tsara, na inona na inona Ubuntu, ny fisian'ny distro miorina amin'ny fanandramana (izany hoe, marin-toerana tokoa) dia zavatra azo antoka fa olona maro no niandry efa ela. Ankehitriny dia mijanona ho fanohanana azy io sy hahitana ny fisokafany 😀
Adiero… mandefa fanavaozana mandroso tsy mila misintona kinova feno vaovao
"Raha nataon'izy ireo ho maodelin'ny Rolling Release, dia izy io no ho solon'ny LMDE."
Andao hojerentsika ny fijerin'ny birao, ary tsy misy bibikely be loatra izany.
Vaovao mahafaly izany, distro nalaina avy tamin'i Debian + KDE 😮 mba hialana amin'ireo fizarana azo avy amin'ny Ubuntu Great 😀
Ary hanana ny lozisialy rindrambaiko manokana… Apper sa Muon? Mbola ho hita eo 😀
Muon Discover dia tsara.
Ity distro ity dia mila famoahana mihodina sy hikarakarana ny pitsopitsony (toy ny fandikan-teny tsy hita ao amin'ny menio, varavarankely Kdesudo ...). Raha tsy izany dia andao jerena izay fandrisihana omen'izy ireo hanovana ny Kubuntu ...
Aglezabad dia hoy izy:
Dingana lehibe ho anao izay manomboka amin'ny Linux ary manana "fanajana" an'i Debian ho distro. Hanaraka ny fivoarany aho satria misy zavatra tena tsara afaka mivoaka avy amin'izany.
Mamaly an'i Aglezabad
Ho zaraina amin'ny Debian ihany koa izy io, saingy hampiasa izany Systemd!. Ho mailo amin'ny vaovao aho.
Jereo raha azoko ny fampitahana
Tanglu = Debian - hyperstability + firmware = Ubuntu - Canonical
Misy zavatra hafa tsy ampy ve?
Tanglu = Debian - hyperstability + firmware = Ubuntu - Apple
Toa tsy toa ahy io fampitahana io .. inona koa no manome ahy hadisoana .. Tsy mino aho fa hitondra vokany toa ilay narosonao 😛
Izaho manokana dia mahita azy ho ubuntu hafa nefa tsy ubuntu, na toy ny LMDE tsy misy mihodina.
Manantena aho fa tsy ho toy izany 😉
Satria mifototra amin'ny fitsapana an'i Debian dia tsy azonao atao ny mampihena ny hyperstability.
Tanglu = Testing Debian + x + firmware an'ny tompony = Ubuntu - Apple + Stability
Aiza x no mikasika ny fizarana, tsy haiko na manamboatra bug na manamboatra ilay rindrambaiko izy ireo.
toa liana loatra ka tsy marina.
fandaniam-potoana hafa izay tsy ho lasa aiza intsony, miala tsiny fa tsy mahalala fomba tokoa, fa ny hevitro
Tsy ianao irery no mieritreritra toy izao.
Tadidiko volana vitsivitsy lasa izay izay voalaza rehetra momba ny SolusOs ary hampiasa izany mandrakizay ny olon-drehetra ary bla bla bla… .. ary vitsy no mahatadidy izany, mainka moa fa ny fampiasana azy.
Ireo nidera azy fatratra dia ireo izay mitory momba an'i Manjaro ankehitriny.
Arangoiti dia hoy izy:
Uyyyyyyyyyy Yoyo, heveriko fa ho anao ity.
Na izany na tsy izany, heveriko fa mety ho tsara, tsy maintsy ho hitantsika izay hitranga, hitandrina aho. Ary raha ny tokony ho izy, satria ianao no manonona azy, Manjaro dia fizarana lehibe fa aza adino ny Cinnarch, izay tetikasa espaniola eo an-tampony.
Mamaly an'i Arangoiti
Manampia ary manohiza ny fako amin'ny fanaovana fork an'ny distros hafa.
Raha tokony hanatevin-daharana ny hery sy hampifantoka azy ireo amina distrona reny vitsivitsy dia manokan-tena ho amin'izany izy ireo.
Rubiño dia hoy izy:
Nanazava izy ireo faq raha hiara-hiasa amin'i Debian izy ireo, raha ny marina dia natombok'ireo mpamorona an'io distro io ny tetikasa. Ny zava-mitranga dia misy zavatra tsy vitan'i Debian, toy ny fisian'ny firmware manan-kaja avy amin'ny installer, na ny fisorohana ny hatsiaka.
Ny olona dia manana foana ny antony hanombohana tetikasa, amin'ny tranga maro dia mitombina tanteraka izy ireo ary amin'ny hafa tsy dia be loatra. Ny marina dia alohan'ny anontanianao ireo antony ireo dia tokony ho fantatrao izany.
Valiny tamin'i Rubiño
rla dia hoy izy:
Liana kokoa amin'ity aho:
Manaraka izay tadiaviko, Debian-rolling-testing-stable.
Mamaly an'i rla
Tena mahaliana izany, saingy amin'ny fizarana be dia be dia tsy hoe efa nisy olona nanao zavatra mitovy amin'izany, ary fantatrao ihany koa fa miaraka amin'i Debian dia mampiasa distro angano ianao.
Ny tiana holazaina dia hoe Tanglu, raha tazonina ny hevitra momba ny fanambarana ofisialy, dia tsy hijanona ho Debian izany. Ny fitsapana an'i Debian dia saingy tsy misy hatsiaka. Ny mahatsikaiky dia ny ao amin'ny Community G + amin'ireo olona vitsy ananantsika amin'izao fotoana izao dia misy:
Daniel Nicoletti »Mpanorina ny La Comunidad ary mpikambana ao amin'ny KDE
Philip Muškovac »Developer Kubuntu
Misy zavatra milaza amiko fa i Tanglu dia ho distro tsara ProKDE. Ary tsia, tsy nisy olona nanao zavatra mitovy amin'ny tian'ireto bandy avy ao Tanglu ireto hatao .. Ny disto rehetra miorina amin'i Debian ary mifantoka amin'ny mpampiasa farany, miankina amin'ny tsimbadika famoahana sy ireo fonosana mivoaka amin'ny fitsapana .. Raha mihamangatsiaka ny fitsapana , SolusOS, LMDE ary ny sisa, mivaingana .. Izany indrindra no tsy tian'ny Tanglu ..
Ampahatsiahiviko fa ny Solusos 2 dia tsy hiorina amin'i Debian
Eny, raha ny hevitra dia, tsy ratsy velively izany, napetrako ohatra Crunchbang fa na dia tsy ampiasaiko toy izany aza aho, isaky ny mametraka debian + openbox aho dia mahazo tombony amin'ireo trano fitehirizan-dry zareo, ka faly aho raha afaka mampiasa KDE aho amin'ny ho avy. hatramin'ny farany amin'ny debian misaotra an'ity distro ity.
Raha mijery ny fizarana fizarana, tsy Solusos ve dia efa debian mifantoka amin'ny mpampiasa farany?
na dia miorina amin'ny debian stable sy tanglu amin'ny fitsapana aza ny solusos, tsy mitovy ve ny hevitra? Fisalasalana ihany.
Tsy mitovy mihitsy izany ... Nohazavaiko tamin'ny fanehoan-kevitra tetsy ambony 😀
sc dia hoy izy:
Raha tsy misy fanavaozana dia iray hafa amin'ny antontam-bato.
Mamaly an'i sc
Manantena aho fa ity fizarana ity raha misy fiafarany mahafaly, na raha tsy izany, dia zavatra mitovy no mitranga toy ny mahazatra, dia miala indray ny olona tsirairay amin'ny fizarana tiany.
josefrito dia hoy izy:
Tsy haiko ... fa i Debian no miasa ho ahy maty ... ary raha tsy famaky aho dia tsy tadidiko izay olana apetrakao ... amin'ny Ubuntu eny, olana maro ... matetika ... mahatsiravina, talohan'ny firaisan-kina izany, saingy nihatsara izy ireo. Distro hafa mifototra amin'ny debian, jereo tsara raha mihodina ilay izy angamba namporisika ahy hanandrana izany.
Mamaly an'i josefrito
Raha azoko tsara ny naoty dia ity Tanglu ity no ho Mint an'i Ubuntu, sa tsy izany? Raha atao teny hafa: Debiana ho an'ny kamo. Fa tsy efa misy ve ireo SolusOS ho an'ireo karazana mpampiasa ireo? Tsy hitako ny dikan'ilay tetikasa raha dinihintsika izao manaraka izao: 1) Hiavaka kely i Debian na tsy hisy, 2) ny vahoaka izay itodihana an'i Debian dia tsy liana amin'ilay karazana fizarana omen'izy ireo anao amin'ny lovia volafotsy, miampy Izy io dia miavaka amin'ny faniriana hifehezana bebe kokoa ny rafitra, 3) ny mpihaino izay itodihana ny tetikasa dia efa mampiasa Ubuntu, Mint, angamba SolusOS na fizarana kisendrasendra hafa mifototra amin'i Debian na angamba nifindra tany Manjaro na Arch ary 4) ny fametrahana sy ny fametahana an'i Debian no zavatra mora indrindra eran'izao tontolo izao. Ampio fotsiny ireo tahiry tsy misy maimaimpoana ary apetaho ireo fonosana ilaina. Toe-javatra mitovy amin'ny atrehanao amin'ny Fedora vao napetraka. Ho an'ireo rehetra voalaza etsy ambony ireo dia tsy hitako izay fandrisihana hitsapana, hanoro na hametraka azy.
Marina tanteraka ianao, fa ny tsirairay kosa te hametraka ny tsirony amin'ny Linux ary manao izany ny olon-drehetra.
hafa .deb bebe kokoa
SolusOS dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fanomezana anao gnome 3 toy ny hoe gnome 2 ary lasa any Pisi izy ireo izao
fa iOSOS ihany no hanana birao Consort izay azo apetraka amin'ny debian hanana tontolo mahazatra
postler dia hoy izy:
Mino aho fa (ny fandikana ny hevitry ny mpanoratra ny "fanambarana izay noheveriko fa tsy hataoko mihitsy" hoy i Ubuntu) dia teo am-piandohany. Miaraka amin'ny antony fantatsika fa nisambotra antsika rehetra izy ireo talohan'ny nanombohany nanamboatra gnome, izay heveriko fa tsy ilaina satria efa mandrakotra ny zava-drehetra i kde.
Mamaly amin'ny paositra
Heveriko fa i Ruffus- dia nanombo ny voany tamin'ny zavatra maro nolazainy. Ankoatr'izay, ivelan'ny antsipirian'ny fomba fanavaozana, Tanglu dia tsy mihoatra ny fitsapana an'i Debian miaraka amin'ny KDE, izay mendrika ny fihoarana, apetraho fotsiny ny fitsapana an'i Debian sy ny KDE; Ary raha te hitady distro efa mahavita azy io ary misy ny mpamily tompony, dia azo atao tahaka ny nataoko izao: Nandeha tany amin'ny Distrowatch aho, nitady ireo sivana voatondro ary tonga tany amin'ireo distro toa KANOTIX sy Epidemie GNU / Linux, izay fitsapana an'i Debian + KDE. Noho izany, tsy hitako izay tena vaovao amin'ny tolo-kevitr'i Tanglu.
Izao no ilazako azy mba hamadihana ny raharaha, tsy misy hafa, satria tsy tiako mihitsy ny fisehoan'ny distro vaovao, na dia aleoko aza mampiasa ny renin'ny distro zanak'ondry.
tigran dia hoy izy:
Toa tsy LMDE hafa izany fa miaraka amin'i KDE? Rehefa mangatsiaka ny motherboard Debian, handefa fonosana iray misy ireo fanavaozana ve ianao? ... Raha misy kinova vaovao isaky ny enim-bolana, inona no mahasamihafa an'ireo fonosana LMDE?
Mamaly an'i tigran
Mafana ny soso-kevitra !!, fa miaraka amin'ny KDE ny birao fandriako. Andao hojerentsika rehefa mandeha ny fotoana ny endrika isehoany na ajanony ny fakana azy, etsy ankilany fa tsy mahatratra izay tadiaviny ireo distro hafa, tsy manala an'i Tanglu ho azy io, sa tsy izany? Ho hitantsika, ho hitantsika, ary ho fantatsika avy eo!
amin'izao fotoana izao dia tsara kokoa ny mampiasa debian mivantana
Ok .. Ahoana raha te hametraka KDE 4.10 ianao izao izao ohatra? Fantatro fa ny fanangonana no vahaolana sa diso aho? 😛
Fantatrao ve ny fototr'ilay anarana? Fanafohezana ve? T (esting) ANGL (linux) U (ser)?
Nikaroka aho fa tsy ...
Eny, tsy misy hevitra .. Mila manontany aho .. Marina fa tsy dia tsara tarehy izy io ..
Ity no nolazain'ny mpitarika ny tetikasa tamiko tao amin'ny IRC:
19:58:54 ximion: woah, milay ity!
19:59:10 ximion: mbola mila fanamafisana avy amin'i Debian aho fa avela hampiasa ity logo ity…
19:59:42 ximion: (misy kinova miova amin'ny fihodinan'ny Debian, ary tsy azoko antoka raha manitsakitsaka ny mari-pamantarana Debian izany. Mieritreritra aho fa tsia, fa aleo milamina amin'izany)
20:00:22 elav: Heveriko fa tsy .. fa, aza hadino izany 🙂
20:00:45 elav: tiako ity sary famantarana ity
20:01:23 ximion: raha manitsakitsaka ny mari-pamantarana ity dia azontsika atao ny manova ny tadin-tsolika mba ho hafa kely fotsiny - ny fifandraisana amin'i Debian dia ho hita eo ihany (amin'ny alàlan'ny fampiasana swirl), fa tsy ilay Debian famantarana
20:01:37 ximion: dantti_l laptop: misy olona tsy tia ny anarana Tanglu 😀
20:02:08 Raha ny fanazavana, Tanglu no dikan'izany?
20:03:29 ximion: tsy misy ^^
20:03:44 ximion: nanana fizotran'ny fikarohana anarana mandreraka izahay
20:04:17 ximion: nitady anarana izahay izay a) tsy generic b) tsy ampiasain'ny olona ho an'ny .org sy .net domains c) tsara feo amin'ny anglisy, alemanina ary brasil
20:04:32 ximion: naharitra ela vao nahita an'i Tanglu
20:04:52 ximion: heverinay izao fa fitambaran'ilay Tangerine Breziliana sy Alemanina Iglu 😛
20:06:19 ximion: Vao tsy ela akory izay no nahalalako fa misy tanàna na faritany any Shina antsoina hoe……
Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny zavatra notadiavin'izy ireo dia anarana izay tsy mahazatra, izay tsy ampiasain'ny olon-kafa ary toa tsara amin'ny teny Anglisy, Alemanina ary Portiogey.
misaotra mamaly foana!
Nisoratra anarana tamin'ilay lisitra aho hitsikilo ary raha afaka miara-miasa aho, nefa aza miditra amin'ny irc.
Mety amiko izany fa heveriko fa efa be loatra ny fizarana ary tena tsara. Ity dia iray hafa izay hivoaka ho an'ny vondrom-piarahamonina hitsapana azy ary hanomboka hiresaka hahitana ny fandehany. Mety tian'izy ireo ilay izy satria mety halany. Rehefa mivoaka izany dia ho ny tsara indrindra saingy araka ny nolazain'ny olona tamin'ny fanehoan-kevitra etsy ambony, aorian'ny fitsapana azy dia hiverina amin'ny distro tany am-boalohany izy ireo. Angamba ho tonga amin'ny zavatra iray, angamba tsia.
Tsy hitako ny vaovao, distro miorina amin'ny distro hafa izy io. Aiza ny vaovao ?. Ny zava-baovao dia distro manomboka amin'ny rangotra. Ny ambiny dia ny mametaka an'i Debian.
Aorian'ny LMDE sy SolusOS dia tonga Tanglu. Maniry ny hahita vintana ianao, fa mifikitra amin'i Debian aho.
Eh, farany hisy Debian tsy maimbo 😛
Raha ny traikefa OOTB dia misy ny fanekena ny peripheraly, ny fahitana automagic ny rafi-tsarimihetsika hybrid ary ny mety hametrahana Steam sy Desura amin'ireo rindrambaiko ara-barotra hafa, azo antoka fa tanjona lehibe izany… ho an'ireo ñoños deianeros mazava ho azy.
Tsy ela aho no nampiasa aptosid -Sid stable sy RR- saingy mampanantena izany distro izany ho betsaka lavitra.
Tsy manana ahiahy aho fa hanongotra azy i Tanglu, na dia Debian aza>: D
Efa nilaza izany ny raibeko, ny geek Debianita dia tsara kokoa noho ny fahalalana feno avonavona ...
buaghhh, tsy zakako ireo diso azo avy, petaka fotsiny izy ireo, manamboatra distro hatrany am-boalohany izy ireo, ary raha tsy miara-miasa amin'ireo misy izy ireo, ny sisa dia mandany fotoana… ..
Raha tsy famotsorana ilay izy dia aleoko manohy amin'ny Debian Testing.
na fanavaozana farafahakeliny isam-bolana na isam-bolana.
Fa na izany aza, ndao hantenaina fa hahavokatra, saingy tsy ny tsy fahampian'ny fanavaozana izany fa tsy ny famoahana ihany koa raha RR, azoko antoka fa na ireo mpampiasa Fedora, suse ary ny hafa aza farafaharatsiny te hanandrana ny distro.
Tiako be ity, rehefa manavao ny fitaovana entiko amin'ny pc misy ahy aho, hanaisotra ny sabayon aho ary nieritreritra ny hametraka arch kde saingy toa hitako izao fa hiandry aho ary hametraka tanglu ...
josean dia hoy izy:
Tena tsy dia mahita saina loatra aho. Toa tetik'asa manokana iray hafa io, mendri-piderana tokoa nefa mbola hijanona eo ihany.
Amin'ny farany isika rehetra dia miverina amin'ny suse, fedora, debian, sabayon sns ,,. Amin'ny ankapobeny dia manana fizara natokana ho an'ny fanandramana izahay ary raha misy zavatra manaitra anay dia mijanona mandra-pahatongan'ny famoahana manaraka izay mahazo fanohanana ampy avy amin'ireo bilaogy vangiantsika.
Izaho manokana dia aleoko suse ho an'ny kde sy debian miaraka amin'ny boaty openbox.
Andohalambo ratsy loatra, tsy fantatro raha izaho na ny ekipako fa tsy azoko atao ny miasa am-pahamendrehana. Inona no hataontsika?
Mamaly an'i josean
tanglu, fiasco, tsy zava-baovao, mitovy ihany, diso fanantenana tanteraka, hifikitra amin'ny debian 7 aho ary azo antoka fa debian 8 na eo aza ny systemd.
Amboary ny olana amin'ny Movistar 3G USB Modem ao amin'ny KDE4
Misy Xubuntu 13.04 Beta 1